बैशाखीमा अडिएको कांग्रेस - Pahilo News
वास्तवमा यस्तो शीर्षक राख्ने मेरो कुनै ईच्छाको कुरा होइन । व्यक्तिगतरुपमा एउटा लामो ईतिहास र आन्दोलनमा विशिष्ट भूमिका र योगदान भएका राजनीतिक शक्तिहरु कमजोर हुँदा र तिनीरुको जनताबीच साख गिर्दा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने मानिस हुँ म । तर, तथ्यबाट हामी कोही पनि पर भाग्न सक्दैनौँ । यतिबेला नेपाली कांग्रेस बैशाखीमा उभिएको छ । कांग्रेसकै नेता वा कार्यकर्ताले अलिकति आफ्नै बारेमा घोत्लिएर सोच्ने हो भने पनि उनीहरुले सहजरुपमा यस्तो महशुस गर्ने नै छन् । झट्ट हेर्दा संसद्मा कांग्रेस ठूलो दल छ । सरकारको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरिरहेको छ । तर, समकालिन राजनीतिमा कांग्रेस नराम्ररी कमजोर भएको छ ।
भर्खर सम्पन्न दुई चरणका स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीको अस्तित्व रक्षाका निम्ति पनि कांग्रेसको बैशाखी नबनी सुखै थिएन । तर, कांग्रेसले समेत माओवादीको बैशाखी टेकेर उभिने कोशिस गर्यो । सुहाउँदो प्रतिष्पर्धी बन्नकै निम्ति पनि उसले यस किसिमको रणनीति गर्नुपर्यो । आखिर कांग्रेस यस्तो हालतमा कसरी पुग्यो ? गहन विश्लेषणको आवश्यकता छ । सायद कांग्रेसजनले पनि यसको विश्लेषण गरेकै होलान् ।
ईतिहास कमजोर भएर होइन, नेपाली कांग्रेसको इतिहास लामो छ । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आएको पार्टी हो । नेपालको राजनीतिमा कहलिएका नेताहरु विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमसेर, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरीजाप्रसाद कोइराला जस्ता नेताहरुको विरासत नेपाली कांग्रेससँग छ । राणा शासन विरोधी संघर्ष, पंचायती शासन विरोधी संघर्ष र राजतन्त्र विरोधी संघर्षको लामो ईतिहास छ नेपाली कांग्रेससँग । यसरी हेर्दा ईतिहासको खडेरी कांग्रेसमा छैन ।
कांग्रेसको बारेमा सोच्दा विश्लेषण गर्दा म वीपी कोइरालालाई सम्झन्छु । वीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनिरहँदा उनले हरेक परिवारसँग एउटा घर, एउटा दुहुनो गाई र एउटा करेसाबारीको कल्पना गरेका थिए । यसो गर्दै गर्दा उनले भारतीय राजनीतिमा राममनोहर लोहियासँग सम्बन्ध बनाएका थिए ।
कांग्रेसको बारेमा सोच्दा विश्लेषण गर्दा म वीपी कोइरालालाई सम्झन्छु । वीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनिरहँदा उनले हरेक परिवारसँग एउटा घर, एउटा दुहुनो गाई र एउटा करेसाबारीको कल्पना गरेका थिए । यसो गर्दै गर्दा उनले भारतीय राजनीतिमा राममनोहर लोहियासँग सम्बन्ध बनाएका थिए । लोहिया र नेहरुवीचको अन्तरविरोधमा वीपी समाजवादी नेताको रुपमा लोहियासँगै सबन्ध राख्थे । बरु नेहरुसँगको सम्बन्ध विग्रियोस् । वास्ता गर्दैनथेँ । यसरी वीपीले कांग्रेसलाई पनि तल्लो हुँदाखाने वर्गकै पार्टीको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
राष्ट्रियताको मामिलामा वीपी खरो देखिन्छन् । उनी झुकेनन् । आफु प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत उनले नेपाल एक स्वाधिन र स्वतन्त्र राष्ट्रका हैसियतले पाकिस्तान र ईजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । निर्वासनमा रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले वीपीलाई भारतमा बस्ने भए दक्षिणतिर गएर बस होइन भने भारतको उत्तरी भू–भागमा बसेर नेपालको राजनीति नगर भनिन् । वीपीले त्यसलाई गंभीररुपमा लिए र अपमान ठाने । उनी नेपालमै बसेर राजनीति गर्ने निचोडमा पुगे र राष्ट्रिय मेलमिलापको नारासहित नेपाल फर्के । उनी भारतीय संस्थापनको हेपाहा प्रबृत्तिको विरोधी रहँदै आए । उनीहरुको खटनपटनलाई सहेनन् । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणमा गए ।
चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति माओत्सेतुङ र प्रधानमन्त्री चाओ एन लाईसँग भेटघाट गरे । उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा चाओ एन लाई नेपाल भ्रमणमा आए । सगरमाथा सम्बन्धी विवाद त्यतिबेलै सुल्झिएको थियो । वीपीले भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहे । भारतकै छत्रछायाँमा बसिरहने कुरालाई अस्वीकार गरे । हातहतियार खरखजाना आदि भारत वा भारतकै बाटो भएर ल्याउनुपर्ने कुरालाई खण्डन गरे र चीनबाट सीधै तातोपानी भन्सारतिरबाट ल्याउने आँट गरे । वास्तवमा वीपीले सुरक्षा, परराष्ट्र संबन्ध वा अरुपनि राजनीति, अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा नेपालको स्वतन्त्र हैसियत कायम गर्न खोजेका थिए । वीपीले भारतीय शासक वर्गको नवउपनिवेशवादी चिन्तन र व्यवहारलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
वीपीको ईतिहास अध्ययन गर्दा हामीलाई गौरवबोध हुन्छ । वीपीको बेला र अहिलेको कांग्रेससँग तुलना गर्दा सबैलाई टिठ लाग्छ र भन्न मन लाग्छ, हरे कांग्रेस ! अहिलेको कांग्रेस घिँरौलाको झालजस्तो, झिक्रो विना उभिनै नसक्ने अत्वित्व गुमेको अवस्थामा पुगेको छ । आजको कांग्रेसलाई वीपीले स्थापना गरेको कांग्रेस भनेर गर्व गर्न सकिएला त ?
आजको कांग्रेस के गर्दै छ ? कांग्रेस किन कर्कलो गलेजसरी गल्यो र राष्ट्रले नै चिन्ता गर्ने ठाउँमा पुग्यो ? एकछिन मनन् गरौं । मैले यसको विश्लेषणको निचोड के निकालें भने कांगे्रस सिद्धान्त र नीतिच्युत हुँदै गयो । कांग्रेसको नेतृत्व भुत्ते हुँदै गयो । त्यति मात्र होइन कांग्रेस अहिले दाउपेचमा आधारित राजनीति गर्न थाल्यो । जसको परिणाम कांग्रेस मधेशमा पाईने धामन सर्प जस्तो बन्न पुगेको छ । देख्दा ठूलो कालो लामो अजङ्गको छ । तर, मान्छे देख्यो कि बेतोड भाग्छ । टोकिहाल्यो भने पनि विष शून्य छ । अझ भन्ने हो भने प्रभावहीन लामकिरो जस्तो । कांग्रेस पनि देख्दा त कहाँ सानो छ र ? संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल । सरकारमा पनि छ । लामो ईतिहास भएको । नेतृत्वको लामो श्रृंखला । सबै देखिन्छ । तर बदलिएको परिस्थितिमा प्रभावहीन बन्दै गएको छ ।
स्थापनाकालदेखि उसले तीनवटा कुरालाई आफ्नो वैचारिक आधार मान्दै आयो । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद । कांग्रेसको सिद्धान्त र नीतिविहिनता यहिनेर देखियो । सबैभन्दा पहिलो कुरा उसले नेपाललाई एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्रको रुपमा अगाडि बढाउने, कसैको पराधिनता स्वीकार नगर्ने सोंचलाई अघि सारेको देखिन्छ सिद्धान्ततः । वीपीबाट त्यस किसिमको व्यवहार हुन खोजेको पनि स्पष्ट हो । तर, आजको कांग्रेसले यस सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न सकेको छैन । राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्ने बुझ्नै नसक्ने ठाउँमा कांग्रेस पुगेको छ ।
भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाउँछ, नाकावन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न सक्दैन । यसकाविरुद्ध एउटा बक्तव्य पनि दिन सक्दैन । नेपालले आफ्नो संविधान आफै बनाउन खोज्छ, भारतले रोक्न खोज्छ, निर्देशन गर्छ, र गलत मान्यता लाद्न खोज्छ । तर, यतिबेलाको कांग्रेस त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन । बरु लम्पसार पर्छ । भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा शेर बहादुर देउवा संविधान संशोधन गर्न सकिन, आगामी दिनमा गर्छु भनेर वचनवद्ध हुनु त्यसैको दृष्टान्त हो । हाम्रो देशको संविधान संशोधनको कुरा भारतमा गएर स्पष्टिकरण दिनु पर्ने विषय हो र ? यो उनको लाचारीपन हो । कांग्रेसको स्थापित मान्यताको स्खलन हो । तर, कांग्रेस केही बोल्दैन । कांग्रेस स्वयं लाचार भैसक्यो भन्ने प्रमाण पनि हो, यो ।
प्रजातन्त्रको मान्यतामा पनि कांग्रेसले सही बाटो लिन सकिरहेको छैन । बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक देशहरुले पनि समाजवादका कतिपय सिद्धान्त र कार्यक्रमहरुलाई अपनाईरहेका छन् । लोककल्याणकारी सिद्धान्तलाई पछ्याइरहेका छन् । यद्यपि कांग्रेस यसो गर्दैन । ऊ लोकतन्त्रको पुरातन परिभाषा जसले संगठन गर्न, बोल्न, लेख्न, छाप्न दिन्छ त्यसैलाई सन्तुष्टिको विषय बनाइरहेको छ । जबकि जनताको जनजीविका, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनको परिवर्तनसँग नजोडिएको लोकतन्त्र चल्नै नसक्ने भइसके । खोई कांग्रेसले कुरा बुझेको ?
प्रजातन्त्रको मान्यतामा पनि कांग्रेसले सही बाटो लिन सकिरहेको छैन । बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक देशहरुले पनि समाजवादका कतिपय सिद्धान्त र कार्यक्रमहरुलाई अपनाईरहेका छन् । लोककल्याणकारी सिद्धान्तलाई पछ्याइरहेका छन् । यद्यपि कांग्रेस यसो गर्दैन । ऊ लोकतन्त्रको पुरातन परिभाषा जसले संगठन गर्न, बोल्न, लेख्न, छाप्न दिन्छ त्यसैलाई सन्तुष्टिको विषय बनाइरहेको छ ।
पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य भइसकेपछिको लामो अवधि कांग्रेस सत्तामै बसेको छ । तर देशका गरीब विपन्न जनता, पिछडिएको क्षेत्र, जाति, भाषा, समुुदाय कसैलेपनि संझिने गरी एउटा पनि कार्यक्रम उसले दिन सकेन । देखिने, सुनिने, वा भन्न लायक कुनैपनि काम हुन सकेन । यहाँभन्दा विचारको टाटपल्टाई के हुन्छ ? अलि सोच्नुपर्छ कि ?
राज्य र समाजको भूमिकालाई स्थापित गर्ने सिद्धान्त समाजवाद हो । कांग्रेसले स्थापना कालदेखि मान्यताको रुपमा लिदै आएको सिद्धान्त मध्येको एउटा खम्बा समाजवाद पनि हो । कार्यक्रमहरुमा व्यानरको टुप्पोमा समाजवाद भनेर लेख्न छोडेको पनि छैन । तर व्यवहारमा कांग्रेसले विपीको अवसानसँगै समाजवादलाई विसर्जन गरेको छ । ऊ सत्तामा आईसकेपछि भटाभट सरकारी उद्योग कलकारखानाहरु निजीकरण भए ।
खुलाबजार अर्थतन्त्र लागु गर्यो । आर्थिक उदारीकरण उसको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्यो । वल्र्डबैंक, आईएमएफका नीतिहरु नै देशका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिहरु भए । समाजवादका नीतिहरुलाई तिलाञ्जली दिइयो । सुनवल चिनी मिल, गैँडाकोट भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि ईटा टायल कारखानालाई कौडीमो मूल्यमा विक्रि गरियो । राज्यले दायित्वबाट पन्छिने काम गर्यो ।
यसरी कांग्रेसले भन्दै आएका आफ्ना आदर्शहरुलाई छोड्दै र विर्सदै आयो । कुनैपनि आफ्ना आदर्शहरुलाई पछ्याउने र समयानुकुल तिनलाई परिष्कृत गर्ने काम कांग्रेसले गरेकै छैन । जसको कारण कांग्रेस एक्लै उभिन पनि नसकेर अरु कसैको वैशाखी टेकेर उभिनुु पर्ने ठाउँमा पुगेको छ्र । दिशाहीन बन्न पुगेको छ ।
फलस्वरुप कांग्रेस दाउपेचको राजनीति गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । आफु राम्रो भएर अरुलाई जित्ने होईन, अरुलाई नराम्रो बनाएर आफु अगाडि आउने रणनीतिमा लागेको छ । तत्कालीन सभापति गिरीजा प्रसाद कोईरालाले माओवादी खुला राजनीतिमा आउदै गर्दा एमाले बरावरको शक्तिकोरुपमा माओवादीलाई सांसद् बनाउन भूमिका खेल्नु र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा माआवादीको वैशाखी टेकेरै भएपनि एमाले विरुद्ध केन्द्रित हुनु यसैका दृष्टान्तहरु हुन् । दाउपेच धेरै दिन टिक्नेवाला छैन, मुल्य मान्यता र आदर्शको राजनीति गर्नु वान्छनीय हुन्छ । कांग्रेसको भविष्य पनि यसैमा होला । अन्यथा एकादेशको कथा ।
(लेखक अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका वर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुन्)
एमाले पहिलो पार्टी बन्ने यस्ता छन् तीन कारण
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको खासै प्रभाव नदेखिने कुरा पहिलो चरणको निर्वाचनबाट बुझ्न ..